Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Cabdi F. Juxa oo Jawaab kulul u diray Wasiir Goodax | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Cabdi F. Juxa oo Jawaab kulul u diray Wasiir Goodax
Wasiirkii hore ee Waxbarashada Puntland ayaa ku dooday in arrimaha waxbarashada ay maamulkeeda leeyihiin dowlad Goboleedyada, isagoo sheegay in federaalkana laga sameystay in arrimahaas oo kale aysan soo faragelin dowladda dhexe.
Wasiir Godaxow, Puntland waa (ka horeysay Federaalka) pre-federal state dhisan in kabadan 20 sano oo leh manhaj, imtixaan iyo siyaasad waxbarasho oo dhisan waqti dheer. Waa nidaam waxbarasho oo leh sharciyad iyo kalsooni shacab oo buuxda.
Waa nasiib darro inaad maanta ku goodido inaad burburiso nidaamkaas reer Puntland dhisteen. Tan kale waxbarashadu waa shaqo u gaar ah Dawlad-goboleedyada ee maaha wax quseeya Dawlad dhexe. Nidaamka Federalka waxaa loo samaystay inaan arrimahan oo kale mardame meelna marti looga noqon…” ayuu yiri Cabdi Faarax Juxa.
Cabi Faarax Juxa
Cabdi Faarax Juxa ayaa dhowaan u tartamay xilka madaxweynaha Puntland, isagoo aan hal codna ka helin doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Siciid C/llaahi Deni.
Xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa hadda isku haya arrimo dhowr ah oo quseeya federaalka iyo awoodaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Previous articleWasiirka Waxbarashada Somalia oo digniin kasoo saaray go’aan ay qaadatay Puntland [Daawo]
Next articleDad shacab ah oo lagu laayey Xaafad ka tirsan Muqdisho..[Faahfaahin + Magacyada]